गत हप्ताबाट क्रमश…
मेरो जेठ २२ गते कोरोना पोजेटिभ भएको दिन नेपालमा ८,२४३ जना निको भएको थियो भने जेठ २२ गतेसम्म जम्मा ४,८४,३७३ जना निको भइसकेको थियो । जसमा मेरो पनि निको हुनेमा ०१ संख्या थपिएको थियो । अर्कोतिर विश्वमा जेठ २२ गते ५,२२,२०९ जना निको भएको थियो । जेठ २२ गतेसम्म विश्वमा १५,६५,७०,२१३ जना निको भइसकेको थियो । जहाँ मेरो पनि ०१ संख्या थपियो होला निको हुनेमा ।
मलाई कोरोना पोजेटिभ भएको जेठ २२ गते १४ दिन हुदै थियो । विश्वमा सर्वमान्य नियमअनुसार १४ दिनपछि शरीरमा भाइरस भए पनि निस्कृय हुन्छ । त्यसैले घर बाहिर निस्कन पाइन्छ भन्ने भएकोले जेठ २३ गते १५ औं दिन दिपक फुयललाई ब्लेडले चिण्डै हुने गरी कपाल काटन लाए । त्यसपछि होटलसम्म गएर भात खान निस्के ।
जेठ १६ गते मलाई कोरोना पोजेटिभ भएको ०८ औं दिन हुँदै थियो । बिहानको खाना खाए अनि पानी तताएर टाउको नुहाएँ । लगभग ०४ बजेपछि त टाउको सियोले घोचे जस्तो गरी हान्न थाल्यो । त्यहाँदेखि टाउको र जिउ नुहाउन नै छाडीदिए एक महिनासम्म ।
बाँच्नको लागि यतिसम्म गर्नुपर्‍यो कि बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म पटक–पटक ज्वरो र अक्सिजन थाप्न छाडिन १४ दिनसम्म (२०७८ जेठ ०९ गते आइतबारदेखि २०७८ जेठ १४ गते शुक्रबार बेलुकासम्म) जसको विवरण यसरी राखे १४ दिनसम्म ।
फिदिमको कवि धनपति ढुंगेलले जेठ १३ गते फोन गर्नु भयो । जुन दिन मलाई कोरोना पोजेटिभ भएको पाँचौ दिन हुँदै थियो । मेरो पापी मनले सोच्यो त्यसैले तपाईं रिसाउनु हुन्न भने एउटा कुरा सुनाउँछु । किन रिसाउनु हौ कविज्यू । उहाँ भन्न थाल्नु भयो । तपाईंलाई कोरोना पोजेटिभ भएको थाहा पाएको थिएँ । राति सम्झे रामप्रकाश समथिङ लगभग साढे चार सय जनाको मृत्युको अन्त्येष्टिमा सहभागी भइसकेका छन् । उनलाई कोरोनाले केही गरिहाल्यो भने त जम्मा चार जना मुख छोपेका आर्मीले सलामी दिने भए नि ! उनले अरुको मृत्युमा लगाएको गुण त जिरो पो हुने भयो । मैले तपाईंलाई केही नहोस् है भनेर कामना गरे भनेर सुनाउनु भयो ।
धनपति ढुंगेलले भनेको कुरा साच्चो पनि थियो । कोरोना भाइरसका कारणले मृत्यु भएकाहरुको हालत पनि त्यही छ । जान पनि मन लाग्छ तर जान सकिदैन । अर्को कुरा सरकारले कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरुको २५ जना भन्दा बढी मलामी नजानु पनि भनेकै हो । त्यसमा पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर ।
मलाई जेठ ०९ गते कोरोना पोजेटिभ भएपछि मेरो स्वास्थ्यको बारेमा चासो राखी फोन गर्नेहरु जेठ ०९ गते आइतबार २४ जना, जेठ १० गते सोमबार २३ जना, जेठ ११ गते मंगलबार २२ जना, जेठ १२ गते बुधबार १७ जना, जेठ १३ गते बिहीबार १० जना, जेठ १४ गते शुक्रबार १० जना, जेठ १५ गते शनिबार १८ जना, जेठ १६ गते आइतबार ०६ जना, जेठ १७ गते सोमबार १० जना, जेठ १८ गते मंगलबार ०९ जना, जेठ १९ गते बुधबार ०५ जना, जेठ २० गते बिहीबार ०९ जना, जेठ २१ गते शुक्रबार ११ जना र जेठ २२ गते शनिबार ०७ जनाले फोन सम्पर्क गरे । अर्कोतिर फेसबुकमा जेठ ०९ गतेदेखि २२ गतेसम्म ३३३ जनाले स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । फोन गर्नुहरुको नामावली यसरी राखे ।
१४ दिनसम्म टेलीफोन सम्पर्क गरी स्वास्थ्यको बारेमा शुभचीन्तकहरुले चासो राखे जस्तै २०७८ जेठ ०९ गते आइतबारका दिन कोरोना पोजेटिभ भएपछि मैले फेसबुकमा लाएको विवरणपछि फेसबुक मार्फत २०७८ जेठ २२ गते शनिबारका दिनसम्म स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने शुभचीन्तकहरु
०१ रमेश अधिकारी–ताप्लेजुङ,
०२ तेजकुमार राई–फलैचा,
०३ मनोज राई–ओयाम,
०४ विमल राई–ओयाम,
०५ लावाहाङ तावा–थर्पू,
०६ रामबहादुर लक्सम–थर्पू,
०७ रुपक गुरुङ–थर्पू,
०८ बाबा मेनेयाङबो–नागी,
०९ कविता अधिकारी रिजाल–भालुचोक अमपुर,
१० गोमारत्न बर्देवा–पञ्चमी,
११ मदन गौतम–गोपेटार पञ्चमी,
१२ खगेन्द्र सुवेदी–सुभाङ,
१३ तुलसीराम सुवेदी–सुभाङ,
१४ लक्ष्मी काफ्ले–भारपा
१५ भानुभक्त पोखरेल–खुँगा,
१६ भीमराज आङबो–खुँगा,
१७ बसन्त खत्री–एकतिन,
१८ जुनु खतिवडा–एकतिन,
१९ नन्दकुमार आङथोपू–एकतिन,
२० गीता खत्री–एकतिन,
२१ विनोद चौहान–फालेलुङ गाउँपालिका कार्यालय,
२२ मृदुल आङबो–सिदिन,
२३ भीमकुमार बाँस्कोटा–सिदिन,
२४ मुक्ति अधिकारी–मेमेङ,
२५ उदय तिम्सिना–प्राङबुङ,
२६ चन्द्र माङमु–याङनाम,
२७ नरेन्द्र केरुङ–याङनाम,
२८ हुक्ताङ थाम्सुहाङ–याङनाम,
२९ उपेन्द्र श्रेष्ठ–याङनाम,
३० विनय रम्तेल–याङनाम,
३१ गीतबहादुर राई–नांगिन
३२ रुपनारायण चापागाई–नांगिन,
३३ प्रेम आचार्य–नांगिन,
३४ लेखनाथ सिकारु–नांगिन,
३५ जयनारायण चापागाई–नांगिन जरिङगे,
३६ टेकनाथ काफ्ले–नांगिन जरिङगे,
३७ रिञ्जी शेर्पा–नांगिन,
३८ शंकर गुरुङ–नांगिन जरिङगे,
३९ छवी न्यौपाने–नांगिन,
४० रामप्रसाद बाँस्कोटा–रानीटार,
४१ गुरुप्रसाद बाँस्कोटा–रानीटार,
४२ सूर्य अधिकारी–रानीटार,
४३ धनबहादुर गुरुङ–नाम्दुखोला फिदिम
४४ जगनाथ ओझा–फिदिम,
४५ सहमान विश्वकर्मा–फिदिम,
४६ मैया श्रेष्ठ लावती–फिदिम,
४७ चन्द्र काफ्ले–फिदिम,
४८ खविन लुइटेल–फिदिम,
४९ नारायण नेपाल–फिदिम,
५० दिनेश अधिकारी–एनआइसी एशिया बैक फिदिम,
५१ भानु बराल–पूर्व इन्जियिनर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, फिदिम,
५२ परु ढुंगाना–फिदिम,
५३ मित्र अधिकारी–फिदिम,
५४ सरस्वती सिवाकोटी–फिदिम,
५५ भवानी तावा–फिदिम,
५६ हरिचन्द्र लावती–फिदिम,
५७ बल थापा–फिदिम,
५८ ज्ञानु घिमिरे–फिदिम,
५९ रविन्द्र काफ्ले–फिदिम,
६० सेसेहाङ लावती–फिदिम,
६१ राज दिलाञ्जली–फिदिम,
६२ रोमन न्यौपाने–फिदिम,
६३ कुमार ढकाल–फिदिम,
६४ तुलसी भण्डारीे–फिदिम,
६५ यादव गौतम–फिदिम,
६६ गंगा कार्कीे–फिदिम,
६७ सुन्दरी पोखरेल हुमागाई–फिदिम,
६८ शान्ता गौतम–फिदिम,
६९ बुनु लोक्ताम–फिदिम,
७० सोमनाथ थपलिया–फिदिम,
७१ रीता राई–फिदिम,
७२ नैना काफ्ले–फिदिम,
७३ गिरीराज बाँस्कोटा–फिदिम,
७४ आशा जवेगु–फिदिम,
७५ सुजन नेम्बाङ–फिदिम,
७६ दिपेश वानेम फागो–फिदिम,
७७ नारायण थपलिया–फिदिम,
७८ रमेश प्रधानाङग–फिदिम,
७९ धनपति ढुंगेल–फिदिम,
८० हेम रिजाल–फिदिम,
८१ प्रयागराज सुवेदी–फिदिम,
८२ इन्दिरा घिमिरे–फिदिम,
८३ मित्र थापा–फिदिम,
८४ अर्पण थापामगर–फिदिम, ८५ शिवकला आङबो–फिदिम,
८६ डिकबहादुर सिलवाल–फिदिम, ८७ विकेन्द्र वाइबा–फिदिम,
८८ मनिता बेघा लिम्बू–फिदिम, ८९ यामनाथ काफ्ले–फिदिम,
९० देवी गौतम–फिदिम, ९१ विष्णु घिमिरे–फिदिम,
९२ सम्झना राई–फिदिम, ९३ युगमणी सवेहाङ–फिदिम,
९४ गायत्री गौतम–फिदिम, ९५ पूजा गुरुङ–फिदिम,
९६ दुर्गा बराल–फिदिम, ९७ गुरुराज तिम्सिना–फिदिम,
९८ युधिष्टिरराज आमगाई–फिदिम, ९९ लयप्रसाद तिम्सिना–फिदिम,
१०० भरत अधिकारी–फिदिम, १०१ विजयबोध लावती–फिदिम,
१०२ केदार बाँस्कोटा–फिदिम, १०३ सोनेलाल चौधरी–फिदिम,
१०४ राधाकृष्ण न्यौपाने–फिदिम, १०५ टंक श्रेष्ठ–फिदिम,
१०६ उमेश वान्तवा राई–फिदिम, १०७ मचीन्द्र रिजाल–फिदिम,
१०८ मित्रप्रसाद काफ्ले–फिदिम, १०९ तुलसी क्षितिज–फिदिम,
११० एमलाल श्रेष्ठ–फिदिम, १११ प्रविन बाँस्कोटा–फिदिम,
११२ नरेन्द्र गुरुङ–नाम्दुखोला फिदिम, ११३ रमा चापागाई–फिदिम,
११४ दिपक नेपाल–फिदिम, ११५ विमला गुरुङ–फिदिम,
११६ कृष्ण जोशी–डोटी हाल–फिदिम, ११७ आकाश बराल–फिदिम,
११८ नवराज घिमिरे–फिदिम, ११९ रविन्द्र खतिवडा–फिदिम,
१२० सावित्रीदेवी गुरुङ–फिदिम, १२१ हेटनारायण श्रेष्ठ–फिदिम,
१२२ हेमकृष्ण चापागाई–फिदिम, १२३ कृष्ण ओझा–फिदिम,
१२४ विरेन्द्र थोक्लिहाङ–फिदिम, १२५ विनोद ठाकुर–फिदिम,
१२६ शुभराज थापा–फिदिम, १२७ अम्विका मगर–फिदिम,
१२८ रामवीर राई–फिदिम, १२९ पूmलमाया आङबो–फिदिम,
१३० खगेन्द्र बाँस्कोटा–फिदिम, १३१ राजकुमारी सम्बाहाम्फे–फिदिम,
१३२ दिपक फुयल–फिदिम, १३३ बसन्त राई–फिदिम,
१३४ लिला राई–फिदिम, १३५ गंगा ढुंगाना–फिदिम,
१३६ कर्ण माङलाक–फिदिम, १३७ इन्दिरा सिवाकोटी बाँस्कोटा–फिदिम,
१३८ भोला मिश्र–फिदिम, १३९ मैया रिजाल–फिदिम,
१४० रामचन्द्र बमजन–फिदिम, १४१ प्रतिमा पौडेल रानामगर–फिदिम,
१४२ जयन्ता राई–फिदिम, १४३ निरमाया कार्की आङबो–फिदिम,
१४४ रुपेश पर्सैला–फिदिम, १४५ दिपेन्द्र यक्पाङदेन–फिदिम,
१४६ सुष्मा थेबे–फिदिम, १४७ सीता बेघा–फिदिम,
१४८ ओम खतिवडा–फिदिम, १४९ धिरोज मुखिया–फिदिम,
१५० योगमाया नेम्बाङ–फिदिम, १५१ मञ्जु गौतम फुयल–फिदिम,
१५२ विनोद शर्मा बाँस्कोटा–फिदिम, १५३ प्रकाश नेपाल–फिदिम,
१५४ गणेश गौतम–फिदिम, १५५ दुर्गा थापा–फिदिम,
१५६ मनु सिलवाल–फिदिम, १५७ सुवर्ण थापामगर–फिदिम,
१५८ ध्रुव बाँस्कोटा–फिदिम, १५९ खगेन्द्र बर्देवा–फिदिम,
१६० लवदेव ढुंगाना–फिदिम, १६१ अशोक राई–फिदिम,
१६२ देवी थापामागर–फिदिम, १६३ हस्त तामाङ–फिदिम,
१६४ भोजकुमार घिमिरे–फिदिम, १६५ महेन्द्र खडका–फिदिम,
१६६ नुबाहाङ नेम्बाङ–फिदिम, १६७ केशब रिजाल–फिदिम,
१६८ मंगल बेघा–फिदिम, १६९ लक्ष्मी भट्टराई–फिदिम,
१७० शुभराज घिमिरे–फिदिम, १७१ डने शेर्पा–फिदिम,
१७२ सुबास क्षेत्री–फिदिम, १७३ रुपनारायण लावती–फिदिम,
१७४ मनकुमार बराइली–फिदिम, १७५ दिननाथ घिमिरे–फिदिम,
१७६ राधा गौतम–फिदिम, १७७ शम्भु ठाकुर–फिदिम,
१७८ सुबास कान्दु–फिदिम, १७९ अञ्जु काम्बाङ–फिदिम,
१८० दिपेश पौडेल–फिदिम, १८१ मैपति पोखरेल–फिदिम,
१८२ प्रदेश केसी–फिदिम, १८३ गजेन्द्र माबो–फिदिम,
१८४ यादव गौतम–फिदिम, १८५ हयारी डागी–फिदिम,
१८६ पार्वती बराइली–फिदिम, १८७ गोपी सुनिता पन्थाक–फिदिम,
१८८ दिनेश श्रेष्ठ–फिदिम, १८९ बसन्त रिजाल–फिदिम,
१९० प्रेम ओझा–फिदिम, १९१ उमेश अधिकारी–फिदिम,
१९२ सूर्य अधिकारी–फिदिम, १९३ नारायण तुम्बापो–ओदिन फिदिम,
१९४ अञ्जली यक्पाङदेन–फिदिम, १९५ ललित लिम्बू–फिदिम,
१९६ बासु ढुंगाना–फिदिम, १९७ सविना राई–फिदिम,
१९८ राजन काफ्ले केसी–फिदिम, १९९ नरगोपाल रानामगर–फिदिम,
२०० कृष्णमाया बुढाथोकी–फिदिम, २०१ आकाशमनी बराल–फिदिम,
२०२ इन्द्रबहादुर कुरुम्बाङ–फिदिम, २०३ चन्दा ओझा थापा–फिदिम,
२०४ हरि पौडेल–फिदिम, २०५ लोकेन खतिवडा–फिदिम,
२०६ दिपेन यक्पाङदेन–फिदिम, २०७ राधा न्यौपाने–फिदिम,
२०८ नरेन्द्रकुमार केरुङ–फिदिम, २०९ सरिता भण्डारी अधिकारी–फिदिम,
२१० मेनुका विष्ट–फिदिम, २११ पार्वती आमगाई–फिदिम,
२१२ यदुमाया मिश्र पौडेल–फिदिम, २१३ सीता काफ्ले अधिकारी–फिदिम
२१४ सिमा तुम्बापो–चोकमागु, २१५ अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ–इम्बुङ,
२१६ करुणा नेम्बाङ–पौवासारताप, २१७ नरप्रसाद नेम्बाङ–चिलिङदिन,
२१८ नन्द नेम्बाङ–फाक्तेप, २१९ निर्मल अधिकारी–आङसराङ,
२२० राधा निरौला–स्याबरुम्बा, २२१ रुमा बोहरा–यासोक,
२२२ ज्ञानु रिजाल–यासोक, २२३ खडग थापा–मौवा,
२२४ नरेन्द्र बस्नेत–सराङडाँडा, २२५ युद्वबहादुर बोहरा–सप्तमी सराङडाँडा,
२२६ दिलबहादुर गुरुङ–रवी, २२७ सगुन सुसारा–रवी,
२२८ अनिल त्रिखत्री–रवी, २२९ प्रकाश थाम्सुहाङ–इलाम,
२३० सञ्जु उपाध्याय–इलाम, २३१ सरोज भट्टराई–इलाम,
२३२ अर्जुन निरौला–इलाम,
२३३ सलिना ढुंगाना निरौला–आठराई, खाम्लालुङ तेह्रथुम,
२३४ कोपिला ढुंगेल–आठराई खाम्लालुङ तेह्रथुम, २३५ किरण ढकाल–तेह्रथुम,
२३६ लक्ष्मी ढुंगेल–आठराई खाम्लालुङ तेह्रथुम, २३७ सीता ढुंगेल–आठराई खाम्लालुङ तेह्रथुम
२३८ गीता अधिकारी–धनकुटा, २३९ राज माङलाक–धनकुटा,
२४० विदुर सुवेदी–धनकुटा,
२४१ नवराज भट्टराई–विर्तामोड झापा, २४२ हिमाल रिजाल–दमक झापा,
२४३ शोभा ढंगेल घिमिरे–विर्तामोड झापा, २४४ उमेश मिश्र–विर्तामोड झापा,
२४५ ओमभक्त सेडाइ–विर्तामोड झापा, २४६ लेखराज राजबंशी–विर्तामोड झापा,
२४७ फूलमाया गुरुङ (जेठी माइजु) गेउँरिया झापा,
२४८ अञ्जु बुढाथोकी–विर्तामोड झापा, २४९ प्रेमप्रकाश फलारी–धुलाबारी झापा,
२५० रविन्द्र भट्टराई–विर्तामोड झापा, २५१ नरेश राजबंशी–झापा,
२५२ भावना गुरुङ (जेठा मामाको नातिनी) गेउँरिया झापा,
२५३ हरिहर घिमिरे–झापा, २५४ लक्ष्मण सिवाकोटी–झापा,
२५५ देवमान खत्री–विर्तामोड झापा, २५६ निलकण्ठ सापकोटा–दमक झापा,
२५७ अरुण गुरुङ (माइला मामा) गेउँरिया झापा,
२५८ रेणुकृष्ण अधिकारी–झापा, २५९ तारा रिजाल–झापा,
२६० अम्विका खरेल–झापा, २६१ लक्ष्मी ढुंगाना घिमिरे–झापा,
२६२ केदार भण्डारी–झापा, २६३ माधव कल्पित–विर्तामोड झापा,
२६४ मोहन लकाइ–झापा, २६५ भेषराज मिश्र–झापा,
२६६ हिमाल गुरुङ (माइला मामाको छोरा) गेउँरिया झापा,
२६७ केशव भट्टराई–इटहरी सुनसरी, २६८ प्रकाश दिप्साली–धरान सुनसरी,
२६९ पूलकुमारी राई–सुनसरी, २७० बादलदेवी चाम्लिङ–सुनसरी,
२७१ गणेश काम्बाङ–पाँचथर प्रदेश न. (क) सांसद विराटनगर मोरङ,
२७२ नितेश पौडेल–विराटनगर मोरङ, २७३ ज्ञानेन्द्र इवाहाङ–मोरङ,
२७४ पवन राई–मोरङ, २७५ खिलानाथ निरौला–विराटनगर मोरङ,
२७६ कविता चापागाई–विराटनगर मोरङ, २७७ शिव सिंह–सिरहा,
२७८ राजकुमार कर्ण (जे.एस. मुरारका बहुमुखी कलेज)–(मलाई पाँचथर बहुमुखी कलेज पढाउने सर सिरहा,
२७९ दिपक गुरुङ–रानीटार हाल सिन्धुपाल्चोक, २८० सिमा (जमुना) गुरुङ–काठमाडौ,
२८१ सुदर्शन गुरुङ–काठमाडौ, २८२ प्रदर्शन गुरुङ–काठमाडौ,
२८३ तिर्थ ढकाल–काठमाडौ, २८४ रोशन एस्माली मगर–काठमाडौ,
२८५ घनेन्द्र अधिकारी–काठमाडौ, २८६ रमेश शुभेच्छु लुइटेल–काठमाडौ,
२८७ खडग गुरुङ–काठमाडौ २८८ दिपकप्रकाश बाँस्कोटा–काठमाडौ,
२८९ हेटनारायण रम्तेल–काठमाडौ, २९० भक्त राई–काठमाडौ,
२९१ गंगा रसाइली–काठमाडौ, २९२ टीका गुरुङ–काठमाडौैं,
२९३ डा.गोविन्द गुरागाई–काठमाडौ, २९४ विजय जवेगु गुरुङ–काठमाडौ,
२९५ सूर्य बाँस्कोटा–काठमाडौ, २९६ लैनबहादुर थापा–काठमाडौ,
२९७ रामराज भण्डारी–काठमाडौ, २९८ एव.वि. अञ्जान–काठमाडौ,
२९९ डा.नारायण बाँस्कोटा–काठमाडौ, ३०० कृष्णकुमार आङदेम्बे–काठमाडौ,
३०१ कृष्णविक्रम नेम्बाङ–काठमाडौ, ३०२ शान्तिराम न्यौपाने–काठमाडौ,
३०३ साइमान राई–कान्तिपुर दैनिक काठमाडौ, ३०४ विश्व महर्जन–काठमाडौ,
३०५ शशीकला सम्बाहाम्फे–ललितपुर, ३०६ गंगा अविलासी–साहित्यकार रुपन्देही,
३०७ जसु गुरुङ–पोखरा कास्की, ३०८ रोशनी गुरुङ–पोखरा कास्की
३०९ गौरी तमू–पोखरा कास्की, ३१० सञ्जु संग्रौला–पोखरा कास्की,
३११ रेणु मास्के, ३१२ जगत चेम्जोङ,
३१३ अग्नी गजुरेल, ३१४ विद्या गौतम,
३१५ रुद्र कार्की, ३१६ केदार अधिकारी,
३१७ गजेन दासी, ३१८ यम वाजी,
३१९ इश्वरी अधिकारी, ३२० कुमार कार्की,
३२१ नवराज चम्लागाई, ३२२ विकास क्षेत्री,
३२३ मदनकुमार बोहरा, ३२४ टुका बराल,
३२५ पुष्पलता उप्रेती, ३२६ शिव राई,
३२७ कल्पना वाग्ले न्यौपाने, ३२८ राजेन्द्र केरुङ,
३२९ राज अधिकारी, ३३० रविन गुरुङ,
३३१ खडानन्द ढुंगाना, ३३२ गीता पोखरेल,
३३३ हर्क नेम्बाङ, ३३४ राजकुमार श्रेष्ठ,
३३५ सविना पोखरेल आचार्य, ३३६ चिरणजीवि कार्की,
३३७ क्यालविन सुब्बा–भारत आर्मी, ३३८ दिपेश गुरुङ–दुबइ,
३३९ सावित्री सिपी–पोर्चुगल, ३४० नमो बुद्व (कञ्चन गुरुङ) दक्षिण कोरिया,
३४१ तिबेन्द्र रानामगर–दक्षिण कोरिया, ३४२ गोविन्द गिरी प्रेरणा–अमेरीका,
३४३ नरेश प्रसाइ–अमेरीका, ३४४ दिनेश पराजुली–अमेरीका,
३४५ सजना अधिकारी–अमेरीका, ३४६ किरण अधिकारी–अमेरीका,
३४७ खेमसिं थाम्सुहाङ–यूके, ३४८ सन्त नेम्बाङ–यूके,
३४९ गीता भण्डारी निरौला–क्यानाडा, ३५० मन्दिरा भण्डारी–क्यानाडा,
३५१ कुमार खत्री–अष्ट्रेलिया, ३५२ मिना खनाल–अष्ट्रेलिया,
एक पटक त घरको तिनै तलामा कोरोना पोजेटिभ
मलाई २०७८ जेठ ०९ गते आइतबारका दिन कोरोना पोजेटिभ भएपछि आराम गरीरहेको थिए । जेठ २१ गते मलाई कोरोना पोजेटिभ भएको १३ दिन हुदैथियो । भारपा हाल फिदिम ०१ भानुमार्ग स्थित मानदेव केरुङको घरमा किराना पसल गर्ने लमु तामाङको श्रीमान प्रेम तामाङ (जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा कार्यरत जनपथ प्रहरी) लाई पनि २०७८ जेठ २१ गते शुक्रबारका दिन कोरोना परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएछ । कोरोना पोजेटिभ हुनेहरु घर–घरमा गएर आराम गर्ने भनेपछि उनले श्रीमति लमु तामाङलाई फोन गरेछ । फेरि त्यति बेला लमुको आमा पनि विराम भइ लमुसंगै बसेर उपचार गराइरहेकी थिइ ।
श्रीमान जि ले कोरोना पोजेटिभ भयो भनेर फोन त गरे तर कहाँ र कसरी बस्ने भन्ने समस्या भयो । एउटा कोठामा पसल अनि अर्को कोठामा खाने बस्ने । त्यसैले मलाई आइ समस्या राखेपछि हाम्रो घरमा आएर बस्दा हुन्छ भनेपछि जेठ २१ गते नै एम्बुलेन्समा उनको श्रीमान प्रेम आइपुगी सिरान तला किचनमा जेठ ३० गते आइतबारसम्म १० दिन बसे । मेरो जेठ २२ गते १४ दिन भएकोले मैले प्रयोग गर्ने टवाइलेट प्रेम तामाङलाई छाडीदिएर म तल्लो तलामा झरे । उनले पानी भने सिरान तलामा नै प्रयोग गरे ।मलाई अलि निको हुदै थियो कोरोना भाइरस । फेरि घरमै शुलभ कर परामर्श सेवामा काम गर्ने भाइ सञ्जय राजबंशीलाई २०७८ जेठ २४ गते सोमबारका दिन परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देदियो । उनले म त घरमा नै गएर आराम गर्छु भनेकोले सोही दिन एम्बुलेन्स खोजेर झापा पठाइदिएको । सञ्जयलाई पोजेटिभ भएको भोलि पल्ट २०७८ जेठ २५ गते मंगलबारका दिन फेरि उनी संगै काम गर्ने शिव राजबंशीलाई पनि परिक्षण क्रममा पोजेटिभ देखियो । उनले पनि म घरमा नै गएर आराम गर्छु भनेपछि जेठ २६ गते बुधबारका दिन एम्बुलेन्समा बलराम राजबंशीसंग र शिवलाई झापा घरमा पठाएको । अब त निको भयो है भनेको घरमै डेरा गरी बस्ने फिदिम नपा ०७ रानीटार हाल एनआइसी एशिया बैक फिदिम शाखामा कार्यरत दिनेश अधिकारीलाई २०७८ असार ३१ गते बिहिबारका दिन कोरोना परिक्षण क्रममा पोजेटिभ देखियो । उनलाई भण्डारी होटलमा पकाइ दिएको बाफ लिने पानी, चिया खाजा, र विहान बेलुका खाना ल्याउने काममा सहयोग गरे । उनलाई पनि खासै त्यस्तो साह्रो पारेन । एक समयमा त घरमा दोश्रो तलामा सञ्जय, शिव र दिने अधिकारी, तेश्रो तलामा म आफै र चौथो तला किचन र छतमा प्रेम तामाङ गरी तिनै तलामा कोरोना संक्रमित भएकाहरु थियौ । तर जे होस हामी सबैले कोरोनालाई पराजित गर्न सफल भयौं ।
मैले कोरोनाबाट निको हुनको लागिआफूलाई संक्रमण नुहँदासम्म केही जस्तो नहुने । तर जब आपूmलाई पर्छ अनि मात्र थाहा पाइदो रहेछ । त्यसैले आपूmलाई परेपछि निको हुनको लागि हरेक गर्नु पर्ने रहेछ । त्यसै कारणले मैले पनि निको हुनको लागि हरेक विधिहरु अपनाए । जस्तैः
०१ गर्मी भएता पनि पातलो लुगा नलगाई तातो लुगा मात्र लगाए ।
०२ सिमाली, अम्बक र अश्रुको पात लाएर १४ दिनसम्म पानीमा उमालेर एक दिनमा ०४ पटकका दरले बाफ लिए ।
०३ १४ दिनसम्म विहान, दिउँसो र बेलुका ०३ पटक ज्वरो र शरीरको अक्सिजन नापीरहे ।
०४ जहिल्यै तातो पानी मात्रै खाए ।
०५ स्वाथ्यकर्मीहरुको नियमित सम्पर्कमा रहे । केही समस्या आयो की तुरुन्तै फोन गरे ।
०६ बेलुका निन्द्रा लाग्दैन र तनाब हुन्छ भनेर दिउँसो सुत्ने प्रयासै गरीन । सकेसम्म युटुबमा इतिहास, साहित्य र हास्यरस कार्यक्रमहरु मात्र हेरे । समाचारहरु एकदमै न्यून रुपमा हेरे ।
०७ संक्रमण मात्रै हैन निको पनि हुन्छ भन्ने सम्झे । (विश्वमा २०७८ असार २३ गतेसम्म १८ करोड ५६ लाख २९ हजार ०५ सय ८५ जना संक्रमित मध्ये १७ करोड ६९ हजार ०४ सय १६ जना निको भएको)
०८ मलाई खाना पटक्कै रुचेन १४ दिनसम्म तरै पनि निको हुनको लागि मैले एकदिनमा विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरु ४४ पटकसम्म खाए ।
०९ टाउँको, जिउँ दुख्दा, खोकी लाग्दा र पाखाला लाग्दा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसारको औषधी खाए ।
कोरोना संक्रमण भएपछि सिकाइ
०१ नाथे टाउँको दुखेको, ज्वरो आएको, जिउँ दुखेको अनि घाटी दुखेको मौसमी सरुवा हो भन्दै जे पायो त्यही औषधी पसलमा गएर किनेर ल्याएर खादै लापारबाही गर्नु नहुने रहेछ ।
०२ रुघाखोकी हो भन्दै अल्छी गर्नु नहुने रहेछ ।
०३ कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने पनि नआतिकन कसैलाई खान मन लाग्दै भने सकी नसकी तातो पानी र झोल पदार्थहरु धेरै भन्दा धेरै खानु पर्ने रहेछ ।
०४ सकेसम्म टेलीभिजन र फेसबुकमा समाचार हेराइमा न्यूनिकरण गर्नु पर्ने रहेछ । (टेलीभिजन र फेसबुकमा कोरोनाले विश्व कै कोरोनाले मृत्यु भएकाहरुको विवरण देखाइरहने भएकोले अप्ठयारो महसुस हुन सक्छ)
०५ शरीरले सकेसम्म शारीरिक व्यायाम र ध्यान गर्नुमा प्राथमिकता दिनु पर्नेरहेछ ।
०६ विहान दिउँसो सुत्नु भन्दा पनि सक्नेसम्म कोठाभित्रै गरिने कामहरु गरेर व्यस्त रहनु राम्रो । शरीर व्यस्त रहयो भने मलाई कोरोना लागेको छ भन्ने महसुसै नहुने रहेछ ।
०७ ज्वरो र शरीरको अक्सिजन दिनमा कम्तिमा पनि ०३ पटकसम्म नापेर हेर्नु पर्ने रहेछ । शरीरको अक्सिजन ९२ अंक भन्दा कम भयो की स्वास्थ्यकर्मीलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नु पर्ने रहेछ ।
०८ एक्लो महसुस हुन नदिनको लागि अलग्गैबाट परिवारका सदस्य तथा छरछिमेकी वा साथी भाइहरुले बोलाइ रहनु पर्ने रहेछ ।
०९ सकेसम्म, भएसम्म, पुगेसम्म र उपलव्ध भएसम्म आपूm बसेको झ्याल ढोका खुल्ला राख्नु पर्ने रहेछ ।
१० हरेक दिन विहानको घरमा कम्तिमा पनि आधा घण्टा ताप्नु पर्ने रहेछ ।
११ विगतमा जस्तो यस पटकको टाउँको दुखाइ, ज्वरो आउँदा, जिउँ दुख्दा, पखाला लाग्दा र घाटी दुख्दा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाएर ढुक्क हुनु पर्ने रहेछ ।
(नोटः यो कोरोना भाइरसले संक्रमण भएपछि व्यक्तिपिच्छे जस्तो लक्षण देखिएकोले मलाई देखिएको लक्षण अरु संक्रमित हुनेहरुलाई नहुन पनि सक्छ ।)
कोरोनाले निक्कै लामो समयसम्म सतायो । १४ दिन बसेर घर बाहिर त निस्के नि । मलाई ०३ महिनासम्म भोक लागेन । आज यो चाहि खान मन लाग्यो भन्ने नै भएन । अनि बल भन्ने त पुरै जिरो जस्तो भयो । म सधै भण्डारी होटलमा खाना खाएर घरमा आइ सिधै चौथो तलामा गएर दाँत ब्रस गर्थे तर कोरोना लागेपछि सिधै चौथो तला पुग्न गाह्रो हुन्थ्यो । पुरै स्यास्या हुन्थ्यो । त्यसैले तीन महिनासम्म ब्रसहरु तेश्रो तलामा नै राखे ।
सबैको साथ सहयोगले कोरोना भाइरसलाई पराजति गर्न सफल भए । यसमा मलाई १४ दिनसम्म प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने, फोन गर्नु हुनेहरु १७४ जना र म्यासेन्जरमा ३३३ जनाले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु हुनेहरुप्रति विशेष–विशेष आभार प्रकट गर्दछु । यहाँहरुको आर्शिवादले मेरो ज्यान बाँचेको छ । त्यसैले यहाँहरुलाई अब मैले गर्नुपर्ने सहयोगमा मेरो ज्यान सदैव हाजिर हुनेछ ।
कोरोना विरुद्वको पहिलो खोप
कोरोना विरुद्वको खोप पाँचथरमा पनि निक्कै महिना अघिदेखि आएको थियो । तर फिदिम नगरपालिकाले सधै सूचना निकाल्थ्यो उमेर हद तोकेर । २०७८ साउन १६ गतेदेखि १८ गतेसम्म भेरोसेल खोप लाउने ५५ वर्ष भन्दा माथिकालाई भनेर सूचना निकाल्यो । सूचना अनुसार आफ्नो उमेर ५२ मात्र भएकोले साउन १६ गते यादै गरिएन । १७ गते पनि त्यति कै भयो । बजार हल्ला छ फेरि फिदिम नगरपालिका, जनस्वास्थ्य कार्यालय र पाँचथर अस्पतालका कर्मचारी र नेताहरुको आफन्तहरुको घर परिवार, ससुराली परिवार अनि उनीहरुले जाँड खाने ठाउँका सम्मले खोप लाइसके रे भन्ने । के को ५५ वर्ष उमेर चाहियो ।
अगाडि नै यो हल्ला सुने कै हो । फिदिम नगरपालिका, जनस्वास्थ्य कार्यालय र पाँचथर अस्पतालका कर्मचारीहरुमा पनि माथिल्लो तहका त भइहाले कार्यालय सहयोगीको समेत आफन्तले खोप लाएको थाहा थियो । साउन १८ गते त फिदिम नगरपालिकाको सूचना अनुसार मेरो खोप लाउने उमेर त हैन ५५ । तरै पनि पाँचथर उघोग बाणिज्य संघको ०१ सय जना व्यापारीहरुलाई खोप दिने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस गरेकोमा मैले पनि नाम टिपाए । अच्चम पनि लाग्योे शिक्षा स्वास्थ्य नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भन्ने नेपाल सरकार । अनि नाथे एउटा खोप लाउनलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस चाहिने ?
साउन १८ गते खाना खाएर ०९ बजेर ४५ मिनेटमा जनस्वास्थ्य कार्यालय फिदिम ०४ गढी पुगे । कार्यालयमा कोही कर्मचारीहरु थिएनन् । म भन्दा अगाडि नै ५० जना जति भेला भइसकेका थिए । जनस्वास्थ्यको कर्मचारीहरु १० बजेर १५ मिनेटमा कार्यालयको ढोका खोले । भेला भएकाहरु भन्दै थिए साउन १६ गते नागरिकता दिएको आजसम्म खोप पाएको छैन । तर यहाँ कर्मचारी र नेताहरुको आफन्तहरुले १८ वर्षकाले पनि खोप लाएकाछन् ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयमा एकैछिनमा मान्छेको भिड त कति हो कति । के को सामाजिक ०२ मिटरको दुरीको मतलब राखे मान्छेहरुले । स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्छ भनेर न त एक शव्द बोले । न त साबुन पानीले हात धुने ठाउँ नै बनाएका थिए न त सुनीटाइजर नै राखेका थिए ।
साउन १८ गते पनि सुरुमा त ५५ वर्ष माथिका पनि भन्दै थिए । फेरि खुशुखुशु १८ वर्षका, २० वर्षका, २२ वर्षका अनि २५–३० वर्षकाहरुले पनि खोप लाइराखेका दिन्थे । साउन १८ गते नेता, कर्मचारीका त छदैछन् अर्को नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पाँचथर शाखाका आर्यन समुदाय बाँस्कोटा थरका सभापतिको पनि दादगिरी देखियो । उनले पनि आखै अगाडि छोरी ज्वाइ र नातिनीलाई पर्नेलाई कार्ड बनाएर ल्याएर खुसुक्क दिए । त्यो देखेपछि विहान ०९ बजेदेखि लाइनमा बसेका महिलाहरुले मुखमा आए जति भन्नु भने । त्यसपछि कुटन नै जाइलागेका महिलाहरु तर अरुले छुटयाए । त्यति बेला मैले पनि झप्पु दिइहाल न म पनि आउँछु भन्दै कराए । तर हात चाहि हालीहालेनन् ।
साउन १८ गते विहान ०९ बजेर ४५ मिनेटमा लाइन लागेको दिउँसोको ०२ बज्दासम्म पनि केही नलागेपछि नागरिकता चाहि फिर्ता मागेर घर फर्कन लाग्दै थिए । नागरिकता फिर्ता मागे पनि । खोप लाउनलाई पनि कर्मचारी कै आफन्त हुनु पर्ने, पार्टी कै झण्डा बोकेको हुनु पर्ने र नेताहरुकै नजिकको हुनु पर्ने भन्दै कराए पनि । अरु मान्छेहरुले मै तिर हेर्न थाले । आफ्नो त त्यो सबै कुनै पनि छैन भन्ने लाग्दै थियो । त्यति बेला पो फिदिम नगरपालिकाको नगर प्रहरी श्रेष्ठ थरकोले खोप लाउने कार्ड र मेरो नागरिकता ल्याएर दिए । त्यसपछि खोप केन्द्रमा गए अनि फिदिम नगरपालिका वडा न. ०५ चोकमागु स्वास्थ्य चौकीका दिनेश मण्डलबाट कोरोना विरुद्वको पहिलो खोप लाएर घर फर्के । अच्चम चाही भयो फेरि कार्डमा खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीको नाम थियो यशोदा भन्ने तर मलाई खोप लाइदिने चाही पुरुष थियो दिनेश मण्डल । मैले ०४ घण्टा ४३ मिनेट पर्खेर खोप लाउनु पर्‍यो । २०७८ साउन १८ गते पहिलो चरणको खोप लाउनेको संख्या ४१ लाख ६३ हजार ०२ सय ५१ जना पुगेको थियो । जसमा मेरो पनि एक थपियो सोही दिन । दोश्रो चरणको खोप लाउनेको संख्या २० लाख ०१ सय २१ जना थियो ।
दोश्रो खोप २०७८ भदौ २३ गते बुधबारका दिन लगाएको । त्यो दिन पनि उस्तै, विहान १० बजे नै गएर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गइ लाइनमा बसेको । कार्यालयका कर्मचारीहरु आए १० बजेर ३१ मिनेटमा । मैले खोप लाउने कार्ड पाए ११ बजे । ठयाक्क एक घण्टा लाइनमा बस्नु पर्‍यो । कार्ड लिएर खोप लाउने ठाउँमा गए । पाँचथर जिल्ला अस्पतालका कर्मचारी कविता भन्नेले खोप लगाइ दिए । पहिलो खोप लाउँदा दुखेको थिएन तर दोश्रो पटक खोप लाउँदा निक्कै दुख्यो ।
२०७८ भदौ २३ गते पहिलो चरणको खोप लाउनेको संख्या ५६ लाख ८३ हजार ६१ जना पुगेको थियो । दोश्रो चरणको खोप लाउनेको संख्या ५० लाख ५६ हजार ०८ सय ०३ जना पुगेको थियो । दोश्रो चरणको खोप लाउनेमा सोही दिन मेरो पनि एक खोप थपिएको थियो ।
खोप कार्ड यहाँ राख्ने
दोश्रो पटक कोरोनाबाट सक्रमित
२०७८ माघ २४ गते सोमबारका दिन कमल गाउँपालिका झापामा कान्छा मामाको जेठा छोरा छिरिङ गुरुङको बिहेमा सहभागी हुन फिदिमदेखि गएको । बिहेको हुलमुलमा खै कता के भयो–भयो, कसलाई कोरोना लागेको थियो भन्ने कुरा पनि पत्तै भएन ।
२५ गते विहान ०७ बजेतिर झापाबाट फिदिमतिर टयाक्सीमा फर्केको । बाटोमा अचानक गाडीमै ज्वरो आयो, टाउँको दुख्न थाल्यो, जिउँ यति हरामी तरिका दुख्यो, खान मन लागेन, वाकवाकी आउने खोज्ने । फिदिम आइ पुग्नलाई साह्रै गाह्रो भयो । साँझपख फिदिम आइपुगेर कोठामा आराम गरे । फोन गरेर सन्तोष ढुगेललाई औषधी किन्न पठाएन । खान पटक्कै मन लागेन ।
२५ गते बेलुकादेखि सुतेको २७ गतेसम्म सुताइ भयो । कोरोना चाहि कोरोना नै लागेको हो तर मैले चेक गरिन । ओमीक्रोन कोरोना भाइरसको लक्षण जति सबै मिल्ने नै थियो ।
तेश्रो खोप बुस्टर
२०७८ साल चैत ०५ गते शनिबारका दिन पाँचथर उघोग बाणिज्य संघको सभाहलमा तेश्रो खोप बुस्टर लगाए । खोप लगाइ दिने स्वास्थ्यकर्मी समिसा इदिङगो । ०५ गतेसम्म तेश्रो खोप लाउने १८ लाख ३५ हजार ०६ सय ९३ जनाले लगाइ सकेको थियो । त्यसमा मेरो पनि ०१ खोप थपिएको थियो तेश्रो खोप लाउने संख्यामा ।
दोश्रो चरणको कोरोना भाइरसबाट त बचियो है भनेको तेश्रो चरणको कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको थियो । झापा दमक छेव कान्छा मामाको जेठा छोरा छिरिङ गुरुङको बिहेको निम्तो मान्न २०७८ माघ २४ गते सोमबारका दिन पुगे । निम्तो पनि माने तर माघ २५ गते झापाबाट फिदिम घर फर्दर्दै गर्दा गाडीमा अचानक ज्वरो आयो, जिउँ दुख्न थाल्यो, वाकवाकी लाग्यो, टाउँको दुख्ने, खान मन नलाग्ने र आपूmलाई बोल्न मन नलाग्ने र अरुले बोलेको सुन्दा पनि झन्झट लाग्न थाल्यो ।
प्लेन भए पो झापाबाट फिदिम वीस पच्चिस मिनेटमा घर आइपुग्नु । गाडीमा लगभग पाँच छ घण्टा लागि नै हाल्छ । घर आइपुग्न धेरै गाह्रो भयो । पाँच छ घण्टा त मलाई एक महिना जस्तो लाग्यो । बिहेमा हुलमुलमा भेटघाट भयो त्यति नै बेला को बाट कसरी सर्‍यो थाहै भएन । तेश्रो चरणको कोरोना भाइरसको लक्ष्ण सबै मिल्ने थियो तर मैले कोरोना परिक्षण गरिन । ज्वरो र जिउँ दुखेको औषधी खादै केही दिन आराम गरे । अनि केही दिन पछि आफै ठिक भयो । मैले सम्झे तीन चरणको खोप लाएको कारणले होला मलाई तेश्रो चरणको कोरोना भाइरस मेरो शरीरमा पसेपछि साह्रो सताउन सकेन ।
सायद अरुको सेवा गर्नका लागि भनेर होला मेरो जन्म भएको पनि । मेरै आँखै अगाडि संगै काम गरेको साथीहरुको कोरोना भाइरसका कारणले उमेरै नपुगी मृत्यु हुन पुग्यो । धन्न–धन्न–धन्न तेश्रो चरणको कोरोना भाइरसबाट बच्न सफल भए ।
फिदिम नगरपालिका ०१, भानुमार्ग, पाँचथर